Al-Shabaab oo markale weeraray Saldhiga ciidamada ee degaanka Bariire ee gobolka Sh/Hoose – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAl-Shabaab oo markale weeraray Saldhiga ciidamada ee degaanka Bariire ee gobolka Sh/Hoose
Hiiraan Xog, Oct 02, 2017:- Al-shabaab ayaa markale weerar xoogan ku qaaday Saldhiga ciidamada dowlada ee ku yaalo degaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Alshabaab ayaa xalay labo jaho ka soo werartay saldhiga ciidamada Bariire xiliga la sheegay inay diyarsanayeen ciidamada dowlada Soomaaliya.
Alshabaab ayaa weerarka ku bilaabay dhowr madaafiic oo ay ku garaaceen Saldhigga Ciidanka Milatariga ee dowlada Soomaaliya, waxa uuna halkaa dagaalka ka socday ku dhawaad laba saac.
Faarax Maxamed Cabdi oo ah Guddoomiye ku-xigeenka degmada Owdheegle ee gobalka Shabeelaha Hoose, ayaa sheegay in weerarka uu ahaa mid gaadmo ah, isla markaana ay ciidamadu iska difaaceen.
Guddoomiye ku-xigeenka waxa uu tilmaamay in dagaalka lagu dilay Alshabaab badan oo uu sheegay in meydadkooda ay iminka yaalan afafka hore ee Saldhiga.
”Waxaa Saldhiga hordhooban meydadka Alshabaabkii weerarka ku qaaday ciidamada iyaga un baa ku jabay dagaalka”
Alshabaab ayaa qeyb kamid ah maamula deegaanka Owdheegle, kadib markii ay dhawaan Qarax ku jireen Buundadii deegaanka kala qeybin jirtay taas oo hakad galisay isku socodka Gaadiidka deegaankaasi.
Docda kale, Ciidanka Dowladda ayaa dhinaca kale ka jooga deegaanka waxaana kala qeybisa labada dhinac Buundada deegaankaasi oo dhawaan AlShabaab Qarax ku xireen kadiba kala go’day.